Obi dị anyị ụtọ na i wepụtara oge gị gụọ broshọ a. O doro anyị anya na ị ghọtakwuola ndị anyị bụ, ọrụ anyị na-arụ na otú e si hazie ọgbakọ anyị. Anyị ma na broshọ a enyerela gị aka ịhụ na ọ bụ anyịnwa na-eme uche Jehova taa. Gbalịa na-amụkwu gbasara Chineke, na-akọkwara ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị ihe ndị ị na-amụta. Gbalịakwa na-abịachi ọmụmụ ihe anyị anya.—Ndị Hibru 10:23-25.
Ọ bụrụ na ị na-amụkwu gbasara Jehova, ị ga-achọpụta na ọ hụrụ gị n’anya. Nke a ga-emezi ka ị gbaa mbọ na-eme ihe gosiri na gịnwa hụkwara ya n’anya. (1 Jọn 4:8-10, 19) Ma, olee ihe ị ga-eme iji gosi Jehova na ị hụrụ ya n’anya? Gịnị mere ịkpa àgwà otú Baịbụl kwuru ga-eji abara gị uru? Oleekwa ihe ga-enyere gị aka isoro anyị na-eme uche Chineke? Obi ga-adị onye gị na ya na-amụ Baịbụl ụtọ inyere gị aka ka ị mata azịza ajụjụ ndị a. Ịmata ha ga-eme ka gị na ndị ezinụlọ gị ‘nọrọ n’ịhụnanya Chineke, nke ga-eduga unu ná ndụ ebighị ebi.’—Jud 21.
Gbalịa mụtakwuo eziokwu dị na Baịbụl. Akwụkwọ ọzọ ga-enyere gị aka ime otú ahụ bụ “Nọrọnụ n’Ịhụnanya Chineke”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ị̀ Ga-eme Uche Jehova?